Kubatana kweBongo: Dzivirira uye Gonesa Ndangariro Yako! Tsvaga [HERE]!
Ruzivo Piritsi: Tsvaga yakanakisa sarudzo uye tsvaga yakanakisa imwe!
Cayenne mhiripiri: Tsvaga zvakavanzika zveichi chinonhuwira!
Zvigadzirwa	 27 2018 June
Brain Kubatana: chirongwa icho chinobatsira kudzivirira Alzheimer's!
Alzheimer: zita rechirwere ichi ratozivikanwa uye rinotyiwa nevazhinji. Kwemakore, zvakajairika kuti vanhu varasikirwe nehunyanzvi hwekuziva uye nehunyanzvi hwekuisa mumusoro. Nekudaro, vanhu vazhinji vatove nedhigirii reAlzheimer uye havana zano. Mune ino kesi, nguva yakakosha uye iri kutambiswa nepo vechidiki vangave vatove kuvadzivirira kubva pakuve nechirwere mune ramangwana. Naizvozvo, iyo Brain Kubatana ndicho chirongwa chinozo gumisa yako isina kusimba ndangariro uye kudzivirira iyi mamiriro ekuwedzera.
Ona zvese nezvechirongwa ichi mumisoro iri pazasi.
Nzira yekunyorera kuBrain Batanidza?
Kana iwe uchitoziva chirongwa uye uchida kusaina munguva pfupi, pinda iyo webhusaiti kuburikidza neiyi link https://sl.conexaocerebro.com.br uye unyore zvako zvemunhu uye zvebhengi ruzivo kuti utange kugamuchira zvese zvaunofanirwa.
Ruzivo rwako ruchange rwakachengeteka uye saiti iri yakavimbika chaizvo, hapana njodzi yekubiridzira. Nekudaro, izvi zvinongovimbiswa kune avo vanowana iyo yepamutemo webhusaiti. Nzira chete yekutenga yako Brain Kubatanidza Chirongwa iri kuburikidza neiyi link iripamusoro, kana nekudzvanya bhatani pazasi. Mamwe masayiti anoti ane chirongwa chimwe chete chitsotsi, usadonhedza misungo yeinternet! Tenga chete kubva kune yepamutemo webhusaiti.
Kuti uwane iyo webhusaiti yepamutemo, tinya pane bhatani pazasi:
[junkie-yambiro style = "tsvuku"] Attention! Isu hatisi ivo vatengesi vepamutemo vechirongwa ichi. Isu tinongozivisa nezveConexão Cérebro, kuti uwane webhusaiti yepamutemo yechigadzirwa tinya pano. [/ junkie-yambiro]
Ndeipi webhusaiti yepamutemo
Kuti urege kutora njodzi mukubhadhara, kuendesa kana muchigadzirwa chinunurwa, gara uchiita shuwa kuti kutenga kwako kunoitwa zvakananga nemugadziri wechigadzirwa. Panyaya yaConexão Cérebro, iyo webhusaiti yepamutemo ndeye https://sl.conexaocerebro.com.br uye kuburikidza nayo uchave nezvakanakira zvakanakira, mukuwedzera pakubvisa kusahadzika kwako kwese nezvechirongwa.
DZVANYA PANO KUTI UCHIDZIDZWE KUNE WENYU WETSITSI YEMAONERO BRAIN
Mitengo uye nzira yekubhadhara
Imwe yemabhenefiti eConexão Cérebro ndeyekuti yakasikwa nachiremba nyanzvi anotenda mukuparadzira ruzivo kuruzhinji rwenyika nenzira inogoneka. Naizvozvo, kukosha kwechirongwa kuri kwekufananidzira, kudiki sezvinobvira. Kukosha uku ndekwe kungogonesa kugadzirwa chaiko uye kugoverwa kwezviri mukati, pasina kudzikisira nyanzvi dzakazvipira zvakanyanya kuzviita.
Mari yenguva dzose yekunyorera yeiyi nhepfenyuro ndeye R $ 190,80. Nekudaro, kana iwe ukawana iyo yepamutemo webhusaiti, iwe unenge uine yakasarudzika sarudzo yekubhadhara chete Gumi nemaviri eBRL 12 pamwedzi. Wakambozvifunga here izvo isingasviki BRL 15 pamwedzi inogona kuwedzera ndangariro yako uye kukuchengetedza kubva panjodzi yekuora mwoyo zvachose? Zvakakosha chaizvo.
Iwe unogona zvakare kubhadhara nekubhanga slip kana kiredhiti kadhi, uye pakadhi iwe une mukana wekuzvipatsanura kanoverengeka pasina mubereko. Pasina kutaura kuti mubhajeti rebhangi, kutenga kunotora nguva kuverengerwa, nekudaro, kuwana kwako zvirimo kunotora nguva yakati rebei kupfuura nekadhi.
Kuti utenge yako Brain Connection Chirongwa ikozvino tinya pane bhatani pazasi:
Mushure mezvose: Chii chinonzi Brain Connection?
Yakafungidzirwa nachiremba wezveuropi ane makore mazhinji echiitiko mumunda, Conexão Cérebro chirongwa chine matipi anoshanda ekudzivirira Alzheimer's.
Vanhu vazhinji vanoziva mumwe munhu mukuru kana kuti vangangonzwa nezveAlzheimer's uye vanoziva kuti chirwere ichi chinotyisa zvakadii. Nekudaro, vashoma vanhu vanoziva kuti inogona kukanganisa munhu wese mune mamwe mazera ehupenyu (kwete kungokwegura chete) kusvika padiki padiki. Tisingazive izvi, tinopedzisira taisa parutivi kurovedza kwehuropi uye nekukurumidza kukwegura ndangariro.
Neichi chikonzero, Conexão Cérebro inosvitsa akasiyana matipi kune avo vanonyorera. Podcasts, marepoti, mavhidhiyo uye mamwe mafomati enhau ane zvese zvese kudzivirira Alzheimer's zvakasikwa. Muchirongwa uchaona zvakavanzika nezvemishonga yekuparadza uropi, pamwe neyekudzidzira kurovedza uye bvunzo kutarisa kugona kwako kwepfungwa. Uyezve, iwe ucharamba uine mukana kune yakasarudzika chikuva. Mariri, iwe unobvunza Dr. Annunciato zvakananga uye anopindura mibvunzo yako yese.
Zvakawanda pamutengo wakaderera kwazvo, handizvo here?
Unogona here kudzivirira Alzheimer's?
Ehe! Kana iwe uchifunga kuti sitiroko kana kuti Alzheimer's haigone kudzivirirwa, warasika! Chokwadi, kurapwa kweavo vanotova neAlzheimer kwakanyanya kuomarara, nekuti chirwere ichi chinoshanduka nekukurumidza zvakanyanya kana chisina kuchengetwa zvakanaka.
Zvisinei, kune avo vasati vasvika kukwegura, kudzivirira kuora mwoyo kunogona. Uye hapana chakaomarara. Nechirongwa iwe uchaona kuti zuva nezuva kurovedza muviri kwepfungwa kunogona kusimudzira kusimbisa kwako, kutarisa uye kugona mukugadzirisa matambudziko. Uye mhedzisiro yacho inokurumidza. Mushure mezvose, kana ukaitwa nemazvo mazuva ese, uropi hwako hunokurumidza kukurumidza.
Funga nezve nhengo yako yeuropi sechinhu chinopfuura musuru, saka inoda kurovedza muviri kuti ishande nemazvo. Uye sezvo iye aine chekuita nezvese zviri mumuviri wake, chero chinhu chidiki chinogona kumufurira. Ndosaka Brain Connection isinganyepe painoti zvinokwanisika kudzivirira Alzheimer's. Usatambise nguva!
NDINODA KUZIVA ZVESE NEZVOKUDZIVIRIRA ALZHEIMER!
Dr. Nelson Annunciato ndiani?
Zvakanaka, iwe watotonzwisisa kuti chirongwa ichi ndechei. Asi zvino, ndiani akauya neiyi pfungwa yekuvandudza kugona kwepfungwa? Ndiani anonyanya kutaurwa nezvaDkt Nelson Annunciato?
Musiki weConexão Cérebro, uye ndosaka inogona zvakare kunzi Programa Annunciato, Dr. Nelson anoziva chaizvo zvaari kutaura nezvazvo. Uyu chiremba wetsinga anozivikanwa zvakanyanya kwete muBrazil chete asiwo mumayunivhesiti ekunze. Mumwe weUSP akapedza kudzidza uye postdoctoral shamwari kuTechnical University yeMunich, auya rwendo rurefu kuti asvike paari.
Kubva pazera diki kwazvo, Dr. Annunciato vakatotaridza hunhu hwemunhu anoona uye ndosaka akawana mafundari maviri ekufunda zvese muBrazil neGerman. Postgraduate muUrtrastructural Study yeCerebellar Cortex yeiyo Inotambudzwa Neurological Mutant Mouse, izvo zvaanonzwisisa zvakanyanya ndezvekubatana kwehuropi.
Nekudaro, usazvidya moyo, chirongwa ichi chakagadzirwa nemunhu akasarudzika mumunda uye akazvipira chose kupfuudza ruzivo rwakakosha urwo iwe rwawakapihwa nezvidzidzo zvako muhupenyu hwako hwese.
Dzidzo yaDkt Nelson inowanikwa pa internet uye unogona kuzvitarisa iwe pachako. Zvakakoshawo kuziva kuti haufanire kutenga Conexão Cerebro nevamwe vatengesi, sezvo Dr. Annunciato chete vane mvumo yekutaura nezvenyaya iyi.
Chii chandigamuchire nekunyorera kuConexão Cerebro?
Iye zvino zvawave nekunzwisisa kuri nani mashandiro anoita Chirongwa ichi, nzwisisa zvauchazogamuchira kana wapedza kunyorera kwako.
NeAnnunciato Chirongwa chekuchengetedza uye kuchengetedza ndangariro, iwe uchagamuchira matipi ekuchinja maitiro, kurovedza kwepfungwa uye zvakavanzika nezve chikafu nemishonga inogona kukuvadza ndangariro dzako.
Kuti uwane shanduko iri nani kune yako tsika, unogona kuona zvirimo mune akasiyana mafomati, semuenzaniso:
Podcasts ma audios akanyorwa naDr Nelson pachake uye iwe uchagamuchira mashanu awo pamwedzi. Mune zvinyorwa izvi iwe uchawana izvo chaizvo zvinokonzeresa chirwere chehuropi uye zvakare kudzidza nhanho-nhanho mirairo yekusimbisa pfungwa dzako uye hutano hwehuropi. Zvese izvi hazvina kuganhurirwa kuAlzheimer's, saDr anotsanangura zvimwe zvirwere zvakaita sesitiroko, migraine uye kushushikana.
Hazvina basa kuterera ma audios kana iwe usingakwanise kunyora zvese zvakataurwa, ndizvo here? Naizvozvo, mumishumo yemwedzi nemwedzi une pfupiso uye mamwe mabhonasi ezvakadzidziswa mumapodcast kuti usarasikirwe nechero rekodhi. Nenzira iyi zvichave nyore kuisa zvese kuita!
Mumavhidhiyo iwe unongoona chete matekiniki ekusimudzira kugona kwekuziva, izvo zvinosanganisira kuwedzera ndangariro uye kuisa pfungwa, pamwe nekudzidza nzira kwayo yekudzidza.
Uine Brain Kubatana iwe uchaona akati wandei mabhenefiti kuita nekukurumidza mumuviri wako, kusanganisira:
Iko Kupa simba Kweyeuchidzo
Kuwedzera kwekutarisa uye kuisa pfungwa pamabasa ezuva nezuva
Kudzora kweAlzheimer uye Kudzivirira
Kuwedzera kugadzirwa muzvidzidzo
Inodzivirira zvimwe zvirwere zvehuropi senge kushushikana, kushaya hope uye kusagadzikana kwepfungwa
➦ Zvinoshamisa! Ini ndoda kunyorera kune iyo Brain Kubatanidza Chirongwa izvozvi!
Ndinogona kutenga Conexão Cerebro kuMercado Livre?
Kwete! Mercado Livre inobvumidza vanhu vazhinji kupinda saiti uye kutengesa zvigadzirwa zvavo. Izvo zvinowanzoitika ndezvekuti vazhinji vevanhu vakaipa vanotengesa zvinhu zvemanyepo, izvo zvisina kumboburitswa kana kudhura kupfuura pamasaiti epakutanga. Naizvozvo, zvinokurudzirwa kuti ugare uchitenga chigadzirwa chaunoda kuburikidza newebsite yepamutemo.
Kunyanya kuConexão Cérebro, hazvigoneke kuwana chirongwa kuburikidza nemamwe mawebhusaiti. Izvi zvinodaro nekuti chete kuburikidza neiyi link sl.conexaocerebro.com.br ndipo paunogamuchira zvemukati zvakananga kubva kumusiki wechirongwa uye nekupindura mibvunzo neiyo neuroscientist nyanzvi munyaya iyi. Chete Dr. Nelson ndivo vanoita Annunciato Chirongwa kuwanikwa online. Saka usatenda mamwe masayiti anoti anotengesa iyi pasuru. Zvechokwadi NDOKUTSANANGIRA!
Icho chirongwa chine zvichemo paReclame Aqui?
Kubatanidza Brain chigadzirwa chemadhijitari, ndiko kuti, unogamuchira zvese zvakanangana nepamhepo uye kwete chigadzirwa chemuviri. Naizvozvo, isu tinogara tichipa zano vatengi kutsvaga Reclame Aqui kune mukurumbira wechigadzirwa. Nekudaro, iwe unovimbisa kuchengetedzeka kwe data rako uye kutenga. Kuona ongororo kubva kune vamwe vatengi zvakare kwakanaka kuti uone kana paine zvimwe zvakanaka kana zvakaipa zviitiko. Kana icho chigadzirwa chichiendesa izvo zvinovimbisa.
Kubva pane izvi, isu kuDieta Já tatsvaga iyo Conexão Cerebro no Reclame Aqui pachedu. Uye isu takashamisika: HAPANA PAMWE PAPA MUKUCHINYORA HERE pamusoro peConexão Cerebro. Izvi zvinoreva kuti chigadzirwa hachizadzise chete zvazvinovimbisa, sezvo panga pasina kunyunyuta nezvazvo kubva kune avo vakatotenga kare.
Zvakawanda, handizvo here?! Unogona kuzviongorora wega uye uchaona kuti zvakakodzera kusaina yako CC!
KUSIMBISA YAKO NDANGARIRO UYE KUSIMBISA URWERE HWAKO UNOGONESA NOKUDzvanya PANO!
Iko Brain Connection inoshanda here? Ona zvipupuriro
Kana iwe uchida kuve nechokwadi kuti hausi kupinda mugomba, ita zvinopfuura kurudyi! Nguva dzose ita shuwa kuti hausi kukanda mari yako kure kana kutambura kubiridzirwa. Ona zvipupuriro kubva kune vamwe vanhu kuti uone kana izvo zvauri kutenga zvinoshanda chaizvo.
Naizvozvo, isu takasarudza pano zvipupuriro kubva kuvanhu chaivo vakabvumidza hunyanzvi hweConexão Cérebro. Ona pazasi:
Iye zvino zvawava kuziva zvese zvaunoda nezve Brain Kubatana, unogona kuzvitenga nekudzvanya bhatani pazasi. Usatambise nguva uye tanga kuwedzera kugona kwako kwepfungwa:
Mahamudra: Dzidza zvese nezve uzivi hunobudirira muBrazil!
Beta-carotene: Chii ichocho? Ndeupi muyero wakakodzera? Ndezvipi zvekudya zvekudya?
Homeopathy: Chii ichocho? Zviri sei? Chaizvoizvo zvinoshanda?
Hibiscus tii: Zvakanakira uye mashandisiro